I-VPN ehamba phambili yeNetflix - Disemba 2020 (Buka Okuqukethwe Okuvinjelwe) - Ezokuzijabulisa
INetflix ineqoqo elikhulu lokuqukethwe ongakubuka, kepha ngenxa yemikhawulo yendawo ukubuka okuqukethwe cishe akunakwenzeka! INetflix ivumela kuphela eminye imitapo yolwazi yayo yokuqukethwe ukuthi itholwe ngabantu basendaweni ethile, futhi awukwazi ukuyifinyelela uma ungaphandle kwesifunda esithile.
Kepha ukufinyelela okuqukethwe okukhawulelwe ngokwendawo akunakwenzeka ngosizo lwe-VPN ehamba phambili yeNetflix. Hhayi kuphela, la ma-VPN asebenziseka kalula kepha futhi asebenza kahle neNetflix.
Ukusebenzisa ama-proxies akuyona inketho esebenzayo njengoba i-Netflix ivimbela abasebenzisi abasebenzisa noma yiluphi uhlobo lwama-proxies ukufinyelela kungxenyekazi. Lapha kule ndatshana, ngibuyekeze ama-VPN amahle kakhulu wokubuka iNetflix.
Ngokwami ​​ngisebenzisa enye yalezi VPN, futhi ngiyajabula ngayo. Bheka lawa ma-Netflix we-Netflix, bese uthola eyodwa ukufinyelela kokuqukethwe obekulangazelela ukukubuka.
I-VPN ehamba phambili yeNetflix - Top 6
Uma ungafuni ukuyekethisa ngejubane lokusakaza, khona-ke i-ExpressVPN kufanele kube ukukhetha kwakho. Le Netflix esetshenziswa kakhulu yeNetflix VPN isebenza kahle ngenqwaba yamadivayisi afaka i-iOS, i-Android, iWindows, iMac, iFire TV Stick, ne-Apple TV, ukuze ukwazi ukujabulela ukubuka iNetflix kunoma iyiphi yalezi zinsiza.
Kunamaseva aphilayo angaphezu kwe-3,000 atholakala nge-ExpressVPN. Lawa maseva asuselwe emazweni angama-94 nezindawo eziyi-160 ngakho-ke uzothola ukufinyelela kulabhulali yonke yeNetflix nge-ExpressVPN.
Uma kwenzeka, i-Netflix ivimba iseva eyodwa, lapho-ke ungaxhuma nenye, ukufinyelela okuqukethwe okudingayo. Nge-ExpressVPN, ungalindela isivinini esisheshayo sombani, futhi ngeke kube khona okusilele ngenkathi kusakazwa. Futhi, akukho mkhawulo wedatha ku-ExpressVPN, futhi ungakujabulela ukubuka imibukiso eminingi noma ama-movie njengoba udinga.
Ungaxhuma ngisho namadivayisi amahlanu ngasikhathi sinye usebenzisa i-ExpressVPN, okusho ukuthi umndeni wakho ungakujabulela nokubuka ama-movie nemibukiso kumadivayisi abo ngohlelo olulodwa kuphela lokubhalisela i-ExpressVPN.
Into enhle kakhulu mayelana I-ExpressVPN yisiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 ! Ungabuyisa imali yakho uma ucabanga ukuthi le yi-VPN engenamsebenzi, futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngeke uyenze.
Izici ezibalulekile ze-ExpressVPN:
Isihloli sejubane esakhelwe ngaphakathi
24 * 7 ukwesekwa bukhoma
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30
Isebenza ne-Hulu, i-BBC iPlayer, i-Sky TV, i-HBO GO, ne-Netflix
ICyberGhost ingenye i-VPN ethembekile yeNetflix njengoba ungafinyelela okuqukethwe okutholakala kuphela emazweni ambalwa njenge-U.S, UK, Australia, Canada, nokunye okuningi. Le VPN iyatholakala ukuthi isetshenziswe ngama-smartphone ne-PC, okusho ukuthi ungayisebenzisa kumadivayisi amaningi usohambweni.
ICyberGhost inamaseva azungeze ama-5,900 atholakala emazweni angama-90, futhi lokho kuzokusiza ekutholeni okuqukethwe yize kunemikhawulo yendawo. Ngaphezu kwalokho, ngeCyberGhost, kunqunyelwe noma akukho kubhafa, futhi ungasakaza okuqukethwe kwekhwalithi ye-HD ngaphandle kwezinkinga.
Ungasebenzisa i-Netflix VPN kumadivayisi ayisikhombisa ngasikhathi sinye kufaka phakathi ama-Smartphones, nama-PC. Ngokwengeziwe, iCyberGhost inikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-45 ngohlelo lwe-VPN, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi ungafuna imali uma ungajabule nge-VPN.
Njenge-ExpressVPN, iCyberGhost iphinde inikeze ngokusekelwa kwamakhasimende ngewashi, futhi ungaxhumana nabo ukuthola noma yiluphi uhlobo losizo oluhlobene nokufaka nokusebenzisa iNetflix VPN.
Izici ezibalulekile zeCyberGhost:
Isebenza kumadivayisi ayisikhombisa ngasikhathi sinye
Kwenzelwe ikakhulukazi abasebenzisi beNetflix
Isebenza nge-Android, iOS, Smart TVs, MacOS, kanye neWindows
Uma kuziwa ekubukeni iNetflix, i-NordVPN ukukhetha kokuqala kwabasebenzisi. Ngiyasebenzisa futhi I-NordVPN yeNetflix ngenxa yesivinini sayo sokusakaza okusheshayo nokuxhumeka okuphephile. Futhi, i-VPN isebenza kahle nezinye izinhlelo zokusebenza futhi, futhi uzothola i- Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 ngayo.
I-NordVPN iyatholakala ngendlela yohlelo lokusebenza lweselula, futhi ungayisebenzisa nesiphequluli se-PC yakho. Ngaphezu kwalokho, i-VPN ixhuma ngokushesha ezinkulungwaneni zamaseva asakazeke emazweni we-59, futhi ungaqala ukubuka iNetflix usohambeni.
INordVPN ibuye isebenze ne-BBC iPlayer, Hulu, namanye amapulatifomu ukuze ezokungcebeleka zingagcini ku-Netflix kuphela. Ungafaka le Netflix VPN kumadivayisi we-6 ukuyisebenzisa ngasikhathi sinye. Ukusekelwa kwengxoxo ebukhoma akunakuqhathaniswa, futhi ungabuza noma yimuphi umbuzo ku-desk yosizo etholakala ku-24 * 7 ukukusiza.
Njengamanye ama-VPN, awukho umkhawulo wenyanga we-cap ku-NordVPN, futhi ungasakaza idatha engenamkhawulo ngayo. Ngiyakuthanda ukusebenzisa uhlelo lwabo lokusebenza lweselula ku-iPad yami, futhi lingixhumanisa ngokushesha nokuqukethwe kweNetflix ebengifisa ukukubuka.
Izici ezibalulekile ze-NordVPN
Isebenza kumadivayisi ayisithupha ngasikhathi sinye
Amaseva alungiselelwe ngokukhethekile weNetflix
Ukuxhaswa kwengxoxo ebukhoma
I-PrivateVPN inikeza ukufinyelela okungcono kokuqukethwe kweNetflix okunomkhawulo njengoba amaseva atholakala cishe kuwo wonke amazwe amakhulu. Futhi, iNetflix VPN yenze kahle esivivinyweni sejubane, futhi yingakho ngikubhalisele lapha.
Ungangena i-VPN ngohlelo lokusebenza lweselula nangesiphequluli. I-PrivateVPN ikuvumela ukuthi uxhume kuze kufike kumadivayisi we-6 ngasikhathi sinye futhi akudingeki ungene ngemvume izikhathi eziningi lapho ubuka i-Netflix nganoma iyiphi enye idivayisi.
Umkhawulokudonsa ongenamkhawulo uqeda imikhawulo yokufinyelela kudatha elinganiselwe, futhi ungabuka okuqukethwe okuningi njengoba udinga. Ukubethela kwamandla okungu-2048-bit kugcina i-akhawunti yakho iphephile futhi ivikelekile ngaso sonke isikhathi.
I-PrivateVPN inikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali se-30day, ukuze uthole imali uma ungatholi inzuzo ye-Netflix VPN. Ngizamile ukusebenzisa i-PrivateVPN, futhi iyi-VPN engabizi kakhulu ongayitholela imali.
Izici ezibalulekile ze-PrivateVPN:
Inqubomgomo yamalogi eZero
NgeSurfShark, ungaxhuma amadivayisi angenamkhawulo ngasikhathi sinye, ngakho-ke akuwena wedwa ojabulela ukubuka iNetflix. I-VPN iyatholakala kumsebenzisi we-smartphone, futhi ungayisebenzisa ngesiphequluli se-PC. ISurfShark inikeza umkhawulokudonsa ongenamkhawulo, futhi akukho mkhawulo kokuqukethwe ongakubuka ngakho. Ukusebenzisa i-VPN kulula, futhi ungayifaka ekuhambeni. Futhi, iSurfShark ithi ngeke kube khona ukubhafa nhlobo futhi uzothola isivinini esithuthukisiwe sokufinyelela okuqukethwe ngekhwalithi ye-HD.
I-VPN inamaseva azungeze i-1,040 + atholakala emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Ingxenye ehamba phambili ngeSurfShark ukutholakala kwemodi ye-NoBorders ekuvumela ukuthi weqe zonke izinhlobo zemikhawulo, uyenze enye yama-VPN amahle kakhulu weNetflix.
Ama-VPN amaningi ahluleka ukusebenza eChina, e-UAE naseTurkey, kepha iSurfShark yilokho okudingayo ukuze ubuke iNetflix uma ukwenye yalezi zindawo. Lapho ubhalisela iSurfShark, uzothola isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30, ngakho-ke imali yakho iphephile uma ukhansela okubhalisile ngaphambi kwezinsuku ezingama-30 zokuyikhetha.
Izici ezibalulekile zeSurfShark:
Ukuxhumeka kwedivayisi okungenamkhawulo
Ayikho imikhawulo ye-bandwidth
Akukho kubhafa nakancane
Isebenza ngamapulatifomu amaningi afaka i-YouTube, i-Sky TV, i-HBO GO, nokunye okuningi
Kuhle kakhulu ekufinyeleleni okuqukethwe okukhawulelwe ngokwendawo
IVyprVPN iza nenqubo yayo yokuphepha yomuntu siqu yokuvikela okungcono ngenkathi ubukele okuqukethwe kuNetflix. I-Netflix VPN isebenza kahle ngamadivayisi ahlukene, kufaka phakathi ama-smartphone namakhompyutha. Futhi, ungaxhuma kuze kufike kumadivayisi ahlukene we-5 ngasikhathi sinye neVyprVPN.
I-VPN inikeza umkhawulokudonsa ongenamkhawulo, futhi ungabuka okuqukethwe ngaphandle kokukhathazeka nganoma imuphi umkhawulo wedatha. Kunamaseva angaba ngu-700 atholakala emazweni ahlukene angama-70 angahumushela kumakheli e-IP ayi-200,000, ngakho-ke uma iNetflix ivimba eyodwa, ungasebenzisa enye ukubuka iNetflix.
Ngaphezu kwalokho, iVyprVPN ayiphazamisi isivinini se-intanethi, ngakho-ke ungabuka okuqukethwe ngaphandle kokubhafa. Ngenkathi ngizama iVyprVPN, ngithole ukuthi uhlelo lokusebenza lweselula lusebenza kahle impela. uzothola ukusekelwa kwengxoxo yewashi nge-VPN ukuze uthole usizo oludingayo ukuxhuma iNetflix VPN.
Uma kukhulunywa ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali bese iVyprVPN iza nesiqinisekiso sezinsuku ezingama-30, futhi ungabuyisa imali yakho uma ukhetha ukukhansela okubhalisile ngaphambi kwesikhathi sesivivinyo sezinsuku ezingama-30.
Izici ezibalulekile zeVyprVPN:
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuphepha okungeziwe
Ukushintsha kweseva okunamandla
Ihambisana neFirefox, iOS, Windows, Blackberry, Linux, kanye neChannelbook
Chofoza lapha ukuze uthenge i-VyprVPN yeNetflix ngeSaphulelo (engeza isixhumanisi sethu lapha nesithombe)
Kungani Udinga I-VPN Engcono Kakhulu yeNetflix?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ukubuka i-Netflix nge-VPN kufanele kube ukukhetha kwakho. Okokuqala, awukwazi ukufinyelela okuqukethwe okukhawulelwe ngokwendawo, futhi udinga i-VPN ukudlula imikhawulo. Futhi, i-Netflix inganquma kalula iningi lama-proxies ngakho-ke awukwazi ukuwasebenzisa.
Ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa lawa ma-VPN amahle kakhulu we-Netflix ukuthi lawa ayabiza, futhi akudingeki ukuthi ukhiphe imali kuwo. Ngivivinya wonke ama-VPN abhalwe ku-athikili, futhi iningi lawo lenzelwe ukubukela iNetflix.
1Q. Ingabe i-Netflix ingavimba lawa ma-VPN?
Iminyaka:Kunamakheli e-umpteen IP atholakalayo ongawasebenzisa, ngakho-ke noma ngabe i-Netflix ivimba ku-IP, ungasebenzisa ezinye izinketho ukufinyelela okuqukethwe. Ngamafuphi, ungabuka okuqukethwe okukhawulelwe ngokwendawo ngaphandle kwezinkinga njengoba i-Netflix ingakwazi ukuvimba wonke amakheli we-IP we-VPN ethile.
2Q. Ungakubuka Kanjani Okuqukethwe Kutholakalela Izithameli Zase-UK Kuphela?
Iminyaka:Ungaxhuma kumaseva wase-UK usebenzisa i-VPN, futhi ngale ndlela, uzokwazi ukufinyelela kokuqukethwe okutholakalela izethameli zase-UK kuphela. Kulula kakhulu, futhi ungakhetha izwe elithile usebenzisa i-VPN.
3Q. Ungakukhansela Kanjani Okubhalisile?
Iminyaka:Ungakhansela okubhaliselwe ngokungena ngemvume ku-akhawunti yakho. Qiniseka ukuthi ukhansela okubhaliselwe ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokubuyiselwa kwemali se-VPN sokubuyisa imali.
Ukusebenzisa lawa ma-VPN kulula, futhi ungalanda uhlelo lokusebenza lweselula esitolo esizinikele sohlelo lokusebenza. Futhi, lokhu kusebenza kahle kuma-PC ukuze ukwazi ukubuka iNetflix kumadivayisi amaningi. Qiniseka ukuthi ufuna isaphulelo usebenzisa izixhumanisi ezitholakala kule ndatshana.
Sisebenzise izixhumanisi eziya kuwebhusayithi esemthethweni, ngakho-ke uthenga okubhaliselwe ngqo kusuka kuwebhusayithi yabazali ye-VPN.
Izinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN ngo-2020
Umshini Wezibhamu Ze-Wildcat : I-Action-Packed Dungeon Crawler!
I-JAA Lifestyle Login | Ukubhalisa ku-JAALlifestyle.com | 2022